My World: အံ့ဖွယ် အပင်ဥမင် ကြီးများ
အံ့ဖွယ် အပင်ဥမင် ကြီးများ
Posted by PhyoPhyo at Wednesday, September 24, 2014 Labels: ဘာသာပြန်ဆောင်းပါး, မေမေ့ရဲ့စာ
1. Wisteria Tunnel, Japan
ကမ္ဘာကြီးဟာ သိပ်ကိုမှ ဆန်းကြယ်ပါတယ်။ ရုက္ခဗေဒပညာဟာလည်း လူတို့လေ့လာလိုက်စားလို့မကုန်နိုင်ပါဘူး။ သစ်ပင်တွေဟာလည်း ထူးဆန်းနေတယ်။ အိမ်မက်ဆန်နေတယ်။
ကြည့်ပါဦး။ ဟောဒီမှာ။ ဥမင် လှိုဏ်ခေါင်းတွေလိုလို လျို ကြီးတွေလိုလို နွားလှည်း ပေါင်းမိုးဂုံးကြီးတွေ လိုလို လှလည်းလှ အံ့သြဖို့ လည်းကောင်းတဲ့ ဥမင် သစ်ပင် ကြီးတွေ မင်းမူ ရှင် သန် ပေါက်ရောက်ရာ မှာ သင် လမ်းမလျှောက်ချင်ဘူးလား။ စာဖတ်သူများ စိတ်ဝင်စားမလားလို့Florist က ဖော်ပြပေးလိုက်ချင်တယ်။
လှလည်းလှ အရိပ် လည်းရ တဒင်္ဂ ခိုနားစရာလည်းရ ဘယ်လောက် ကောင်းသလဲ။ ကြည့်ပါ။ အဖြူတစ်ကန့် ခရမ်းရောင် တစ်ကန့်ရောနှော ပွင့်လေ့ ရှိတဲ့ ဂျပန် နိုင်ငံက Wisteria ပဲနွယ်ပန်းပင်ကြီး တွေပါ။ တစ်ပင်နဲ့ တစ်ပင် ပေါင်းမိုးလို ကူးလူး ယှက်ဖြာပြီးလူသားတွေကို ကြည်နူးမှု ပျော်ရွှင် ချမ်းမြေ့မှုတွေ အံ့သြမှုတွေ ဖြစ်စေဖို့တပါတည်းဖေါ်ထုတ်ပြသ ပေးနေတယ်။ ဒါဟာ ခဏပန်းအလှ မဟုတ်ပါဘူး။ ကမ္ဘာမြေပေါ်မှာ သက်တမ်းအရှည်ဆုံး ပွင့်တဲ့ ပန်းနွယ်ပင် တမျိုးလို့ ဆိုပါတယ်။ သဘာဝဘေးဥပါဒ် အန္တရယ်ကိုလည်း ကာကွယ် ခုခံ ပေးထားခြင်းဖြစ်တယ် တဲ့။ ဖန်လုံအိမ်မှ ထွက်ရှိတဲ့ မလိုလားအပ်သောကာဘွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ငွေ့ များကိုလည်း သူက ပြန်လည် စုတ်ယူ သန့် စင်စေတယ်။လူအများဟာ အဲဒီ လျှောက်လမ်းကလေးမှာ အပျင်းပြေလမ်းလျှောက်ကြဖို့ အလွန်စိတ်ဝင်တစားရှိကြပေမယ့် တချို့ ကတော့ လည်း သူ့ ရဲ့ကိုင်းတွေက ကွေးညွှတ်ပြီး ခြောက်လှန့်သလိုမျိုး ထင်ယောင်ကာ နည်နည်း ကြောက်စိတ်ဝင်မိပါတယ် တဲ့။ တကယ်တန်းပြောရရင် အသက်ရှူ မှားလောက်အောင်ကို လှနေတာပါ တဲ့။
ဒီလှပတဲ့ ခရမ်းရောင် ပဲနွယ် ဥမင် ကြီး Wisteria Tunnel, ဟာ ကာဝါဂျီ ဖူချီ ဂါဒင်းမှာ တည်ရှိပါတယ်။နှစ်စဉ် ဧပြီ မေလ တို့ မှာ "Wisteria Festival” ပွဲတော် ကျင်းပလေ့ ရှိသတဲ့။
2. Jacarandas Walk, Johannesburg
ဒီ အပင် ဥမင် ကတော့ တောင်အာဖရိက နိုင်ငံ ဂျို ဟန်နစ္စဘတ် မြို့တော် က jacarandas walk လို့ခေါ်တဲ့ လျှောက်လမ်း အပင် ဥမင် ကြီးပေါ့။ ဒီဥမင်ကိုတော့ လူတို့ဖန်တီးဆန်းသစ်ထားတဲ့ အပင်တွေ လို့ဆိုပါတယ်။ အမေရိကန် အပူပိုင်းဒေသ အပင်မျိုးကို ကရစ်ဘီယန် ဒေသ မှ ကူးလူး စိုက်ပျိုး ပြုပြင် ထားတာဖြစ်တယ်။ ဒါက ဟို လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် တရာကျော်လောက်ကတည်းကပါ တဲ့။ နှစ်စဉ် အောက်တိုဘာလဆိုရင်ထောင်နဲ့ သောင်းနဲ့ ချီတဲ့ အပင်တွေဟာ ပြွတ်သိပ် ပြည့်ကြပ် နေအောင် အဆုပ်လိုက် အခဲလိုက် ပွင့်လေ့ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဂျိုဟန်နစ္စဘတ် သို့ မဟုတ် ပရစ်တိုးရီးယား နဲ့ဂျာကာရန်ဒါ မြို့ တွေမှာ အံ့သြမကုန်အောင်လှတဲ့ ရှုခင်းကို သင် မြင်တွေ့ နိုင်ပါတယ်။
3. Yew Tunnel, UK ယူကေနိုင်ငံက ယူး ခေါ် ကျောက်ထင်းရှူးပင် ဥမင် ကြီး
The beautiful Yew Tunnel in UK
၁၈ရာစုနှစ်က Dyer family မိသားစုက စိုက်ပျိုးခဲ့တာပါ။ ယူကေ နိုင်ငံမှာတော့ ခုအချိန်ထိ တုနှိုင်းမရှိ အံ့ဖွယ် ကျောက်ထင်းရှူးပင် ဥမင် ပေါ့။ ခရီးသွားဧည့်သည်တွေကို ညှို့ ယူ ဖမ်းစားနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ အပင်တွေ ဖြစ်တယ်။သူ့ ပင်စည် ကိုင်းတွေက ရှည်လာလေလေ ကိုင်းညွှတ်လာလေလေ ကိုင်းညွှတ်လာပလားဆိုရင် သူ့ အလိုလို ကွေးပြီး ပေါင်းမိုးလို နွယ် ဆက် ကူးလူး သွားတော့တယ်။ အသက်အရွယ် အရ သဘာဝအလျှောက် ဖြစ်တည် နေတာမျိုးပါ။
4. Autumn Tree Tunnel, USA
ဒါကတော့ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု ဗါးမောင့် အရပ်ဒေသမှာ ဆောင်းဦး နွေဦးရာသီ မျိုးရောက်ရင် ပင်လုံးကျွတ် ဖူးပွင့်လေ့ ရှိတဲ့သဘာဝ ပေါက် အပင်ဥမင်ကြီးပါပဲ။ လျှောက်လမ်းကလေး က ရှင်းရှင်း ကလေးနှင့် လင်းသန့် နေတယ်။ အကွေ့ အကောက် သိပ်မရှိပဲ ဖြောင့်ဖြူးနေတယ်။ ဟိုဘက် ဒီဘက် ယှက်ဖြာ အုပ်မိုးနေပုံ က ကြည်နူးစရာပါ။ ခြောက်လှန့်မှု မရှိတဲ့ တိတ်ဆိတ်အေးငြိမ်းမှု ကို သင် ပြည့်ပြည့် ၀၀ ခံစားနိုင်ပါတယ် ..တဲ့။ အံ့သြစရာပါလားနော်။
5. Ginkgo Tree Tunnel, Japan
Ginkgo Tree Tunnel, Japanသူက ဂျပန်ပြည် ဇာတိ ပေါ့။ Ginkgo Biloba treesလို့ ပဲ ခေါ်ကြတယ်။ သင် ဂျပန် ရောက်ရင် လမ်းမတွေပေါ်မှာ ပန်းခြံတွေ ထဲမှာ ဥယျာဉ်ကြီးတွေမှာ ဒီအပင် တွေကို မြင်ဖူးနေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တော်တော်လေးမြင့်ပါတယ်။ သက်တမ်းလည်း ရှည်ပါတယ်။ ဟီရိုရှီမား ဗုံးဒါဏ်ကြောင့် အပင်တွေ ပျက်စီးကုန်ရာမှာ ၆ပင်ပဲ ကျန်ရစ်ခဲ့တယ် လို့ဆိုပါတယ်။ ဂျပန်တွေက အဲဒီအပင်တွေကို မျှော်လင့်ခြင်းကို သယ်ဆောင်လာသူ "bearer of hope" လို့ခေါ်ကြတယ်။ ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်တဲ့သတ္တိကို မွေးဖွားပေးတယ်လို့ဂျပန်တွေက ယုံကြည်ကြတယ်။
6. The Dark Hedges, Northern Ireland
အိုင်ယာလန်မြောက်ပိုင်း က အပင် ဥမင် သို့ မဟုတ် အပင် ခြုံတန်းစည်းရိုးကြီး တဲ့။ ဧည့်သည်အများအပြား ၀င်ရောက်တဲ့ တန်ဖိုးအရှိဆုံး နေရာတွေပါ။ အိုင်ယာလန်မှာတော့ အလွန် ပေါ်ပြူလာဖြစ်ပြီး ခရီးသွားဧည့်သည်တွေကို ဆွဲဆောင်ညှို့ ခေါ် နေတဲ့ နေရာတွေပါပဲ တဲ့။ ပန်းချီဆရာတွေ လက်ထပ်ဇနီးမောင်နှံတွေ ဓါတ်ပုံရိုက်ဖို့အများအပြား ရောက်လာကြတယ်။ စိတ်ကြိုကအဖြစ်ဆုံး နေရာပေါ့တဲ့။
7. Bamboo Path, Japan
Bamboo Path, Japan ၀ါးတန်းလမ်းကလေး
ဒီဥမင် လမ်းကလေးကတော့ ဆာဂါနို လို့ ခေါ်တဲ့ဝါးတောဥမင် လမ်းပေါ့။ အရရှိယာမ ဒေသ မှာပါ။သမိုင်းတင်ထားရတဲ့ နာမည်ကျော် ၀ါးတောပင်တွေပါ။ ၀ါးပင်တွေက ရှည်ပြီး အံ့သြရလောက်အောင် စီစီရီရီနဲ့တန်းတန်းမတ်မတ်ညီ နေပါတယ်။ Agency for Cultural Affairs က မပျက်စီးရအောင် ထိမ်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ထားပါတယ်။
၀ါးတောကို လေတိုက်တဲ့အခါများမှာ ၀ါးတောာက ထွက်လာတဲ့ အသံတွေဟာ မှော်ဆရာတွေ ဖန်ဆင်းထုတ်လွှင့်နေသလားထင်မှတ်ရနိုင်ပါသေးသတဲ့။ အသံ မျိုးစုံ ထွက်ပေါ်ရာမှာ အံ့မခန်းပါပဲ။
8. Rua Goncalo de Carvalho, Brazil
ဘရာဇီးနိုင်ငံက Rua Goncalo de Carvalho,လို့ခေါ်တဲ့ အရွက်စိမ်းဥမင်
ဒီ အရွက်စိမ်းဥမင်ကြီးက Porto Alegre.က စတင် ရောက်ရှိ်ခဲ့တာပါ။ တီပူရာနာလို့ ခေါ်တဲ့ ရနံ့ သင်းတဲ့ သစ်နက်တမျိုးကနေ ပွားလာတာဖြစ်ပြီးလမ်းမကြီးတွေမှာ အမိုးဂုံးသဏ္ဍာန် ယှက်ဖြာပြန့်ကားရှင်သန်လာတယ်။ ပတ်ဝန်းကျင် ညစ်ညမ်းမှုကို ၃၀ရာခိုင်နှုန်း သူက လျော့ချပေးနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ မကြာသေးမီက စလို့သမိုင်ရာဇ၀င်မှာရော ယဉ်ကျေးမှုမှာရော စီးပွားရေး အရမှာရောသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အမွေ အနှစ်အဖြစ် နှင့်ရော သတ်မှတ် ထားတာ လူသိထင်ရှားခဲ့တယ်။ ဒီအပင်တွေကြောင့် ဘရာဇီးလ်မြို့တော်သူ မြို့တော်သားတွေက ကျန်းမာရေး ကောင်းတယ် သက်ရှည် ကျန်းမာကြတယ်လို့ယုံကြည်ကြတယ်။
9. Cherry Blossom Tunnel, Germany ဟော မီးရထားကြီး ချယ်ရီဥမင်လှိုဏ်ခေါင်း ထဲက ထွက်လာပါပြီ။ ဘယ်သူတွေ ပါလာပါသလဲ။ နေ့ တိုင်း နေ့ တိုင်း ရထားလေးက အဲဒီလိုပဲ ချစ်စရာကောင်းအောင်ချယ်ရီ ဥမင် ထဲက ထွက်ထွက် လာတယ်။ ဂျာမနီနိုင်ငံကချယ်ရီဖူး ချယ်ရီပွင့်ဥမင် ကြီး တွေပါ။ နွေရာသီဆိုရင် ချယ်ရီ ပန်းတွေက ဂျာမဏီမှာ ဝေဆာနေပါပြီ။ တစ်ပတ် ဆယ်ရက် အနည်းဆုံး တော့ လှနေတာပဲလေ။ ဒီအပင်တွေကို Bonn က လမ်းမကြီးတွေ နံဘေး တစ်လျှောက် ဖြန့် ပြီး အလှစိုက်ခဲ့တာပါ။ ကမ္ဘာတည်သရွေ့အပင်ကလေးတွေ လည်း ရှင်သန် နေကြမှာပဲလေ။
Ref:The amazing Tunnel Trees
(Living Fashion Magazine, October, 2014)
khinmoe moe said...
Lanjut Usia - Tips Perjalanan Menghemat Uang dan Tetap Aman!
၂၁ ရာစု ပေါ်လီယာနာ (အက်ဆေး ၁)
စိတ်ကူးကောင်းကောင်း ခံစားချက်ပြင်းပြင်း မမြင်နိုင်...
ညီမလေးငယ်ငယ် (အက်ဆေး ၆)
လက်ထပ်ခြင်း (သို့မဟုတ်) အတူတကွ နေထိုင်ခြင်း အလှတရာ...
ဘာတွေကို ဘယ်လို မကြာမကြာ